ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: တစ်ခါတုန်းက ပိတောက်ပွင့်ချိန် (၂)
တစ်ခါတုန်းက ပိတောက်ပွင့်ချိန် (၂)
“ဟဲ့ ဇ နင့်အမေက နည်းနည်းလေး အပေါက်ဆိုးတယ်နော် တစ်မျိုးပဲ မာနပဲ ကြီးသလိုလို မာန်ပဲတတ်နေသလိုလိုနဲ့ နည်းနည်းဇီဇာ ကြောင်သလားလို့ ”
“မွှေး ရယ် ငါ့အမေကိုတော့ ခြွင်းချက်လေးထားပေးပါလားဟာ။ ဟုတ်တယ် နင်ပြောသလိုပဲဟ ငါ့အမေက ငါနဲ့ ပတ်သတ်ရင် နဲနဲ အတ္တကြီးတယ်ပြောရမလားပဲ။အဖေသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းကတော့ အမေကအရမ်းကို သိမ်မွေ့ နူးညံ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါ ”
“ဘာလဲ ဇ နင်ပြောချင်တာက အရင်က ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းလာရပြီ ကံဇာတ်ဆရာရဲ့ အလှည့်အပြောင်းမှာ ရုတ်တရုတ် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့ လမ်းကို လျှောက်လိုက်ရလို့ နင့်အမေရဲ့ စိတ်တွေက ခုလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ပြောချင်တာလား ..”
“ဟုတ်တယ် မိုး။ ငါတို့ကို သစ္စာဖောက်လိုက်တာက အဖေ့ရဲ့ ညီအရင်းကြီးလေ။ ငါတို့ ပိုင်ဆိုင်သမျှ တွေကို အကြွေးတွေနဲ့ပါဆိုပြီး သူပိုင်လုပ်သွားတာလေ။ တစ်ကယ်တော့ အဲဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အားလုံးက အမေ့ရဲ့ မိဘပိုင် ပစ္စည်းတွေကို ထုခွဲရောင်းချပြီး အဖေ့ရဲ့ ချွေးတွေနဲ့ တည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့အရာတွေ။ ပြီးတော့ ဒီဦးလေး ဆိုတာက အရင်တုန်းက အမေတို့ပေးတာစားပြီး ထားရာနေစေရာသွားတွေ။ အဖေဆုံးသွားပြီးတော့ လုပ်ငန်းတွေကို နားလည်တဲ့ လူက အဲဒီဦးလေးပဲ ပြီးတော့ ဆွေမျိုးအရင်းကြီးပါ မလုပ်လောက်ပါဘူးလို့ ထင်တဲ့သူက ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်သွားတာလောက် နာကျည်းရတာရှိသေးလို့ လား. ငါ့အတွက်ကြောင့် လောကဓံဆိုတာကို ဒီလောက်ထိတင်းခံထားနိုင်တာ။ ငါ အမေ့ ကိုသနားပြီးချစ်တာ။ ငါ့ကြောင့် အမေစိတ်မဆင်းရဲ စေချင်ဘူးလေ ဒါကြောင့်..”
“အင်း အဲဒါနဲ့ပဲ နင့်အမေရဲ့ သဘောကျအတိုင်း နင်က သားလိမ္မာလေး ဖြစ်အောင်နေတယ် ဆိုပါတော့။”
“ငါ့ဘ၀မှာလည်း အမေတစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်။ အမေ့ဘ၀မှာလဲ ငါတစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်။ ဘာမှမရှိတော့တဲ့ အမေ့မှာ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်တဲ့ ငါ့အတွက် အမေက အတ္တကြီးနေတာ လွန်နေလို့ လား မွှေး ”
“လွန်တယ်ဟ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသာတက်ရတယ်။ နင် class ပြီးမယ့် အချိန်ကို နင့်အမေကို အသိပေးရတယ်။ အိမ်ပြန်ချိန် ညနေ ၆ နာရီထက်မကျော်ရဘူး။ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး မထားရဘူး။ ချစ်သူမထားရဘူး။ နင့်ဘ၀မှာ သူတစ်ယောက်တည်းရှိအောင်လုပ်ထားတာလေ အဲဒါ လွန်တာပေါ့ .”
တစ်ကယ်တော့ သူမွှေးနှင့်မိုးရဲ့ ဘ၀ကိုအားကျသည်။ သူ့ဘ၀လိုမျိုးမွန်းကြပ်မှုများဖြင့် ပိတ်လှောင်မနေကြ။ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုအခွှင့်အရေး အားလုံးပိုင်ဆိုင်ကြရသည်။ အထူးသဖြင့် မွှေး၏ ဟန်ဆောင်ချင်း ကင်းစွာဖြင့် ပွင့်လင်းဖော်ရွေမှုကို သူနှစ်သက်သည်။ မွှေးနှင့်သာ စကားပြောနေရလျှင် သူ့ရဲ့ စိတ်တွေ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေသလိုခံစားရသည်။ စိတ်ချမ်းသာသည်။ သူပျော်သည်။ သူ့ဘ၀ရဲ့ အမောတွေပြေသွားသလို ခံစားရသည်။ ညညအမေ့ရဲ့ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ပြီး ငိုရှိုက်သံတွေကို နားထောင်ဖို့ အင်အားတွေ ပြည့်လာသလို ခံစားရသည်။
“မွှေး နင်တို့ဒီနှစ်လည်း သင်္ကြန်မှာ ရေကစားကြမှာလား”
“ဆော့မှာပေါ့ဟဲ့။ ငါတို့ ကသင်္ကြန်ပိုးပါတယ်။ သင်္ကြန်ဆိုရင် ရေမဆော့ရပဲကို မနေနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ ငါတို့ ရေမကစားရင် လမ်းထိပ်က မဏ္ဏပ်ကို ဘယ်သူဦးစီးမလဲဟဲ့”
“ဟင်း တက္ကသိုလ်တက်တာပဲ ဒုတိယနှစ်ရောက်နေပြီ ခုထိ ဆော့တုန်း”
“ဘာဖြစ်လဲ ငါတို့ကဒီအရွယ်ရောက်တဲ့ အထိ သင်္ကြန်ဆို ရေမဆော့ပဲ နေတာ တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူး။မဏ္ဏပ်မှာ စတုဒီသာကျွေး ရေကစားရတာ ဘယ်လောက်နှစ်သက်ဖို့ကောင်းလဲ။ တူးပို့ တူးပို့ ဆိုတဲ့ သင်္ကြန်ဒိုးလေး ကြားတာနဲ့ ကိုစိတ်ထဲမှာ ပျော်နေမိတာ။”
“အင်း …..ငါလည်း နင်တို့လိုပျော်ချင်တယ်..”
ညှိုးငယ်စွာနှင့် ပြောလာသော ဇ ကြောင့် မိုး သနားသွားမိသည်။ ဘာပဲပြောပြော ဇ လည်းသူတို့လို ပျော်ချင်ရှာမှာပဲ။ နှောင်ဖွဲ့ ခံနေရသော ဇ အတွက် စိတ်မကောင်းမိ။
“ဟဲ့ မိုး တစ်ဟိုဟိုနဲ့ ဘာဖြစ်နေလဲ ပြောစရာရှိတာပြောလေ..”
“ငါတို့ ဒီနှစ်လေ ဇ ကို ရေကစားလို့ ရအောင် ကူညီပေးကြရင် မကောင်းဘူးလား။ ဟိုတစ်နေ့ က သူပြောတာ ငါသနားသွားလို့”
မွှေး က မိုးကို အဓိပ္ပါယ်ပါပါ တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်း
“မိုးရယ် ဒါက သူတို့ သားအမိကိစ္စ ငါတို့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်း ငါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ မေးမယ်။ နင် ဇ ကို သဘောကျနေတာလား.”
မိုး ဘာမှ ပြန်မဖြေ။ သူမ တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေပြန်သည်။
“ဟဲ့ မိမိုး နင်နဲ့ငါ သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီး ဘာမှ ညာဖို့ စဉ်းစားမနေနဲ့ ။ ငါမေးတာ ဟုတ်လား မဟုတ်လားပဲဖြေ. ”
“ဒါ..ဒါ ဆိုလည်း မရှက်တော့ ပါဘူးဟာ။ ဟုတ်တယ်ဟ ငါ ဇ ကိုကြည့်ကြည့်ပြီး သနားနေတာ။ အလို သနားနေရာကနေ..ငါ ..ငါ..”
“ချစ်မိသွားတယ် ဆိုပါတော့။ နင်သူ့အမေကြီး အကြောင်းလဲသိသားနဲ့။ နင်နဲ့ဆိုမဖြစ်ပါဘူး။ နင်စိတ်ဆင်းရဲ ရမယ် သူငယ်ချင်းရဲ့။ ပြီးတော့ နင်က ငါ့လိုမဟုတ်ဘူး။ ပျော့ညံ့ညံ့နဲ့ ။ ဟိုမိန်းမကြီးက ငါ့သူငယ်ချင်းကို ပညာသားပါပါ နှိပ်စက်မှာ။ မစဉ်းစားပါနဲ့ လား ဟာ။ မေ့ပစ်လိုက်။ မေ့ပစ်လိုက်။”
“မွှေး ကလည်းဟာ ခု ငါတို့က ဘာမှ မှမဟုတ်သေးတာ။ ဘာပဲပြောပြော နင်အကြံလေးဘာလေးထုတ်ပါအုန်းဟာ။ ဇ နဲ့ တူတူ ငါတို့ သင်္ကြန်မှာ ရေကစားလို့ ရအောင်လေ လုပ်ပါ သူငယ်ချင်းရာ နော်နော်”
မွှေး သူငယ်ချင်းလေးကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက့်ရင်း
“ဒီနှစ်ဒီကောင်က သူ့အမေနဲ့ တရားရိပ်သာစခန်းပဲ လိုက်ဝင်ရမှာ မဟုတ်လား”
“အင်း တရားရိပ်သာ လိုက်မ၀င်ရအောင် ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲလို့ သူ့အမေပဲ ရိပ်သာကိုသွား သူသာ အိမ်မှာကျန်ခဲ့ရင် သင်္ကြန်မှာ ငါတို့တူတူပျော်လို့ရပြီလေ ဟုတ်ဖူးလား”
“ဟွန်း မိန်းမမိမိုး လူကြည့်တော့ အေးသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ဒါမျိုးကြတော့ ရှင်ကတော်တော်တတ်တယ်နော်”
“လုပ်ပါ မွှေး ကလည်း ။ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့”
မွှေး စဉ်းစားသလို လုပ်ရင်း …
“ဟားရပြီ သူငယ်ချင်း ငါတို့ ဒီလို လုပ်ရအောင်”
သင်္ကြန်မတိုင်ခင် တစ်ရက်အလို ..
“သားရေ အခန်းထဲက ထွက်မလာသေးဖူးလား။မပြီးသေးဘူးလား။ ဒီမှာ တရားစခန်းဝင်ဖို့ အုပ်စုက ကားနဲ့ လာကြိုနေပြီ မှော်ဘီထိတောင်သွားရမှာ တော်ကြာနောက်ကျနေအုန်းမယ် မြန်မြန်လုပ်”
အခန်းထဲမှနေပြီ ဇ တစ်ယောက် ခါးလေးကိုင်းကိုင်းဖြင့် ထွက်လာသည်။ ဇ ပုံစံကိုကြည့်ပြီး
“ဟဲ့ သား ဘာဖြစ်တာလဲ။ နေမကောင်းဘူးလား။မျက်တွင်းတွေလည်း ချိုက်လို့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ညက အိပ်မပျော်ဘူးလား”
“အား ကျွတ်ကျွတ် အမေ သားတရားစခန်းရိပ်သာ လိုက်ပြီး မ၀င်နိုင်တော့ ဘူးထင်တယ်။ ဗိုက်က ရစ်ရစ်ပြီးနာနေတာ ပြီးတော့ ညကလည်း ၀မ်းတွေ ခဏခဏသွားတာ ၆ ခါလောက်ရှိတယ်။ တစ်ညလုံး မအိပ်ရသေးဘူး”
“ဟယ် ဒါဆိုလည်း အမေ မသွားတော့ ဘူး ။ သားမှ နေမကောင်းတာ”
“အမေကလည်း ခုတော့ ၀မ်းသွားတာရပ်သွားပါပြီ။ သား တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်နားလိုက်ရင် သက်သာသွားမှာပါ။ ပြီးတော့ လာခေါ်တဲ့ကားက အိမ်ရှေ့တောင်ရောက်နေပြီ။ အားနာစရာကြီး။ ပြီးတော့ သားလည်း ကလေး မဟုတ်တော့ ပါဘူး အမေရာ။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ အမေ စိတ်ချလက်ချသာ တရားစခန်းကိုသွား။ ပြီးရင် သားဆေးခန်း ကိုယ်ဘာသာကိုယ် သွားလိုက်မယ်။”
“ဟဲ့ အိမ်ထဲက ဟိုသားအမိတွေ မလာသေးဘူးလား။ နေမြင့်လာရင် ပူလာတော့မယ်။ မြန်မြန်လာကြလေ”
ဒါက အိမ်ရှေ့ က အမေ့ ဘော်ဒါတွေ လောဆော်နေတဲ့ အသံ။
“ကဲ ဒါဆိုလည်း အမေ စိတ်ချပြီးသွားမယ်နော်။ တစ်ခုခုဆို ရိပ်သာက ဖုန်းကို လှမ်းဆက်လိုက်သိလား။ အမေ ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်။ သား သေချာတယ်နော် ရတာ။ မရဘူးဆိုလည်း အမေ မလိုက်သွားတော့ ဘူး။”
အမေက စိတ်မချသလို တစ်တွတ်တွတ်ပြောနေတော့ ဇ တစ်ယောက်နဲနဲတော့ မလုံမလဲဖြစ်သွားမ်ိသည်။ ဒါပေမယ့် လိမ်ပြီးမှတော့ ပိရိအောင် ဆက်လိမ်မှ ဖြစ်မည်မို့ ..
“စိတ်ချပါ အမေရာ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သာသွား။ သားဆေးခန်းပြပြီး နားလိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာ။ ခုဟာက ခုချက်ချင်းကြီးလိုက်ခဲ့လို့ ရိပ်သာရောက်မှ တစ်ခုခုဆို ပိုဆိုးနေမှာစိုးလို့။ စိတ်ချလိုက်ချသာသွား။ နော် အမေ နော်”
သည်လိုဖြင့် ဇ တစ်ယောက် မနက်ဖြန်မှာ ရောက်လာတော့ မယ့် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ကို တွေးပြီး ရင်ခုန်နေမိတော့ သည်။ မွှေး ရဲ့ ဘေးနားမှာတစ်နေကုန်နေခွင့်ရပြီး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဆင်နွဲရမည်ဆိုတော့ အိုး ဇ ရင်ထဲ မှာ သင်္ကြန်ဒိုး သံတွေ တူးပို့ တူးပို့ ပေါ့။ အား..နေရင်းထိုင်ရင်း ၀မ်းက သွားချင်လာပြန်သည်။ မွှေး ပေးလိုက်သော ၀မ်းနှုတ်ဆေးက အစွမ်းပြပြန်ပြီထင်သည်။
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေကိုတော့ သင်္ကြန်မတိုင်မှီ အပြီးတင်ပေးပါမယ်လို့ အသိပေးရင်း
ချစ်စွာသော ဘလော့ မောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။
ပုံလေးကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း google ကနေပဲ ရှာပြီးသုံးထားတာပါ။
သဒ္ဓါလှိုင်း5April 2012 at 20:49
သင်္ကြန်အငွေ့အသက်လေးပါတာလေး ဖတ်ရတာ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးလေး ဖြစ်သွားရတယ်.။ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးလည်း မျှော်နေမယ်နော်.။
အားတဲ့အချိန်လေးမှာ ဘလော့လေးရေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်. ပိတ်တော့မပိတ်ပစ်ပါနဲ့.. အားလုံးကသူ့တာဝန်တွေနဲ့သူ နေနေရတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ ဝါသနာနဲ့ဆန္ဒအရ ရသလောက်အချိန်လေးမှာ ရေးပါ. အမြဲအားပေးနေပါတယ်.
နှစ်သစ်ကူးမှာ ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီး ဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ..။
စံပယ်ချို5April 2012 at 22:07
mabaydar 27 April 2012 at 00:06
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးကို မျှော်နေပါတယ်... ကိုယ်တိုင်လဲ ၁ပိုင်း၁ပိုင်း ရေးဖို့ ကြာတတ်သူမို့... သိပ်တော့ မလောရဲပါ... နားလည်စွာနဲ့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို စောင့်မျှော်နေပါမယ်...
သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့ အမေချစ်သား စိတ်ဝင်စားတယ်...
တစ်ခါတုန်းက ပိတောက်ပွင့်ချိန် (၃)